Fisehoan-tsary mampihomehy nataon'i Kirby Jenner | Famoronana an-tserasera
Photoshop dia programa navela manao ratsy ho an'ilay antsoina hoe photomanipulation. Misy mpanakanto sasany izay manana fahaizana lehibe mampifangaro olona samy hafa mba hitondrana antsika hatsarana hatsikana sy mahafinaritra izay manafaka antsika amin'ny fihomehezana na aiza na aiza ahitantsika azy.
I Kirby Jenner, na ilay antsoina hoe God of Photoshop, ilay mety hahatonga anao hifandimby hijaly ireo fihomehezana ireo. Ary io dia ny photomanipulation-ny ambony fotsiny hampidirina ao amin'ireo seho an-tsary toy ny hoe teo tokoa izy tamin'ireny maody haute couture ireny na ireo olona nifindra tamin'ny sehatra hafa.
Jenner mitady ny fotoana maloto hipoitra sary tena mihomehy, ary hampidirina singa sasany izay manome tantara hafa amin'ny sary lehibe. Eo no misy ny majika, satria tsy hainy ny "mametraka ny tenany" amin'ireo olo-malaza rehetra ireo, dia milalao singa vaovao izy hahafahany mamorona ny sangan'asa adala indrindra efa hitanao.
Una tsikera misokatra Inona no mahatonga an'ity tontolo ity misy ny sary sy ny zavatra rehetra ao aminy izay manondraka ireo fotoana feno famirapiratana ireo, saingy tsy dia misy dikany firy. Nampahery azy ireo i Jenner tamin'ny alàlan'ny fomba manokana azony momba ireo sarin-javatra ireo sy ny volombavany sy ny tsy fitandremany, vitany ny tsy manahy ny hatsiaky ny fahitana sasany.
Gazety L'Architecture d'Aujourd'hui
Amin'ity tontolo ity izay toa lavorary daholo ny zava-drehetra, tonga Kirby Jenner frezy eo akaikin'ireo maodely ambony ireo na lasa ampahany amin'ny sarin'ny vondrona izy ka sarotra ny manavaka hoe iza no tena izy ary iza no sandoka.
Mpanakanto Photoshop hanaraka avy amin'ny Instagram miaraka amin'ilay mpanara-dia azy irery ihany no arahin'izy ireo ary an'arivony maro ananany. Tsy misy andro tsara noho ity Alatsinainy ity izay manomboka ny herinandro mba hihomehezana noho ny zava-nitranga mahatsikaiky nataon'i Kirby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ilay azo antsoina hoe andriamanitry ny Photoshop na i Kirby Jenner tsotra izao
Adobe dia miasa ao amin'ny "Photoshop for audio"